Home Wararka Shirkii oo maalintii labaad galaya, iyadoon wali laga hadlin qodobadii xasaasiga ah
Shirkii oo maalintii labaad galaya, iyadoon wali laga hadlin qodobadii xasaasiga ah
Shirkii oo maalintii labaad galaya iyo iyada oo aan wali laga hadlin qodobadii xasaasiga ahaa ay ahayd in shirku xaliyo. Shirka ayaa ay ahayd in diiradda lagu saaro khilaafka ka taagan doorashada xildhibaannada Golaha Shacabka oo qayb ahaan horey uga billaabatay magaalooyinka Muqdisho, Baydhabo, Dhuusamareeb iyo Kismaayo.
Khilaaf ayaa hareeyay doorashadani waqtigeeda la dhaafay, iyadoo Guddiga Hiragalinta Doorashooyinka Heer Federaalna uu dhawaan kala qaybsamay. Waxaa si weyn isha loogu hayaa, sida madaxdu ay isugu raacin doonaan qodobadaasi, kuwaasi oo isbedal ku keeni kara waxyaabihii ay horay ugu heshiiyeen.
Kulankii shalay ayaa intiisa badan ku dhamaaday in eedayn, iyo gar isku dhigasho. Waxaana muuqata in Axmad Madoobe uu gabi ahaanba ka soo horjeestay aragtida Rooble ee ahayd in Farmaajo xoog looga soo saaro Villa Soomaaliya.
Maanta ayaa la filayaa in uu markale shirka dib u furmo iyada oo ayan cadeynin qodobada rasmiga ah ee looga hadalyo kulanka.
Previous articleBooliiska Puntland oo gacanta ku dhigay gaari hub iyo saanad waday
Next articleShacabka Boosaaso oo ku baaqay in meel la saaro xadgudubyadii dhacay
Axmad Madoobe oo maanta soo xulanaya qaar kamida kuraasta Aqalka Hoose
Gaalkacyo oo saakay xeran goobaha ganacsiga & waxbarashada